RASMI: Ciyaaryahankii hore ee Manchester City iyo Barcelona Yaya Toure oo koox cusub ku biiray – Gool FM
RASMI: Ciyaaryahankii hore ee Manchester City iyo Barcelona Yaya Toure oo koox cusub ku biiray
Haaruun July 3, 2019
(Yurub) 03 Luulyo 2019. Ciyaaryahan Yaya Toure ayaa ku biiray kooxda Qingdao Huanghai taasoo ka ciyaarta horyaalka heerka labaad ee dalka Shiinaha (Chinese second division).
Xiddigii hore ee khadka dhexe kooxaha Manchester City iyo Barcelona ayaa ku dhawaaqay inuu dhaqaaqay labo bilood kaddib markii uu beeniyey wararka sheegaya inuu kubadda cagta isaga fariistay oo uu u wareegay dhanka maalmulka.
36-sano jirkaan ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ku qaatay kooxda Olympiakos kaddib markii uu isaga tagay naadiga Manchester City ee ka dhisan dalka Ingiriiska sanadkii 2018-kii.
Toure, kaasoo bartiisa Twitter-ka soo dhigay isagoo xiran maaliyadda kooxdiisa cusub ee Qingdao ayaa website-kiisa rasmiga ah ee www.officialyayatoure.com waxaa uu ku soo qoray:
“Tan iyo markii aan bilaabay xirfaddeyda kubadda cagta, had iyo jeer waxaan jeclaa tartartammada, haddana anigu waxaan go’aansaday inaan bilaabo tartan cusub, isla markaana aan markale taariikh ku sameeyo kooxda kubadda cagta ee Qingdao Huanghai.”
Maxaa ka jira wararka sheegaya in aabaha Neymar uu kulan la yeelanayo maamulka kooxda Barcelona?
Waa kuma ciyaaryahanka berri tijaabada caafimaad u mari doona kooxda Juventus?